Umatshini ojikelezayo oBengezelayo - Abavelisi beeRoller zeRocker abaThengisayo, abaXhasi
Ukudanyaza iRoller JB121311
Isibiyeli: IPlastiki ye-PA, Ubungakanani obunye buhambelana nazo zonke, ubungakanani bunokuhlengahlengiswa. Isondo: I-82A ivili le-PU elinezibane ezi-4-zangaphambili ze-LED, ubungakanani: 72 * 24mm Ukunikela: Isantya esiphezulu sekhabhoni yentsimbi i-ABEC-5 Hardware: Isinyithi sensimbi yentsimbi ene-chrome egqityiweyo, ungaze umhlwa. Ukupakisha: Ibhokisi yesipho, izibini ezingama-20 / i-ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / izibini: $ 5.20 Indawo yokubeka izihlangu: izinto ezintsha, umbala oqaqambileyo, amandla aphezulu, ubhetyebhetye beVili leMathiriyeli: i-PVC, kunye nokuqina okuthile kunye nokunxiba Ukunikela: Iron ethwele, agudileyo kungekho resis ...
Ukudanyaza iRoller JB111311
Isibiyeli: IPlastiki ye-PA, Ubungakanani obunye buhambelana nazo zonke, ubungakanani bunokuhlengahlengiswa. Isondo: I-82A ivili le-PU enamacala amane e-LED akhanyayo, ubungakanani: 72 * 24mm Ukunikela: Isantya esiphezulu sekhabhoni yentsimbi i-ABEC-5 Hardware: Intsimbi yentsimbi yentsimbi ene-chrome egqityiweyo, ungaze umhlwa. Ukupakisha: Ibhokisi yesipho, izibini ezingama-20 / i-ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / izibini: $ 5.60 Iimpawu zokuTyibilika kwamavili: 1. Isilayidi esityibilikayo, isikrufu esithembekileyo esiphakathi ukulungelelanisa ubungakanani 2. Iivili ezi-Smooth zincinci kwaye zilula, kulula ukuyiphatha, inokufakwa kwizihlangu ezithe tyaba ngokuthanda ...
Ukudanyaza iRoller JB132312
Isibiyeli: IPlastiki yePP, Ubungakanani obunye buhambelana nazo zonke, ubungakanani bunokuhlengahlengiswa. Isondo: I-82A ivili le-PU elinezibane ezibengezelayo ze-3-Front, ubungakanani: 72 * 24mm Ukunikela: Isantya esiphezulu sekhabhoni yentsimbi i-ABEC-5 Hardware: Isinyithi sensimbi yentsimbi enezinki ezimnyama ezigqityiweyo, ungaze umhlwa. Ukupakisha: Ibhokisi yesipho, izibini ezingama-20 / i-ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / izibini: $ 4.60 Iimpawu zokuTyibilika kwamavili: 1. Isilayidi esityibilikayo, isikrufu esithembekileyo esiphakathi ukulungelelanisa ubungakanani 2. Iivili ezi-Smooth zincinci kwaye zilula, kulula ukuyiphatha, inokufakwa kwizihlangu ezisicaba e ...
Ukudanyaza iRoller JB151313
Isibiyeli: IPlastiki yePP, Ubungakanani obunye buhambelana nazo zonke, ubungakanani bunokuhlengahlengiswa. Isondo: I-82A ivili le-PU elinezibane ezibengezelayo ze-3-Front, ubungakanani: 70 * 24mm Ukunikela: Isantya esiphezulu sekhabhoni yentsimbi i-ABEC-5 Hardware: Isinyithi sensimbi yentsimbi kunye neBlue zinc eqhutyiweyo, ungaze ube nomhlwa. Ukupakisha: Ibhokisi yesipho, izibini ezingama-20 / i-ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) I-FOB Ningbo / izibini: $ 4.80 Indawo yokubeka izihlangu: izinto ezintsha, umbala oqaqambileyo, amandla aphezulu, ubhetyebhetye obulungileyo; Izinto ezinamavili: i-PVC, kunye nothamba oluthile kunye nokunxiba ukunxiba; Ukunikela: Iron ethwele, agudileyo kwaye akukho ...
Ukudanyaza iRoller JB161311
Isibiyeli: IPlastiki ye-PA, Ubungakanani obunye buhambelana nazo zonke, ubungakanani bunokuhlengahlengiswa. Isondo: I-82A ivili le-PU ngaphandle kwezibane ezibengezelayo ze-LED, ubungakanani: 72 * 24mm Ukunikela: Isantya esiphezulu sekhabhoni yentsimbi i-ABEC-5 Hardware: Isinyithi sensimbi yentsimbi ene-chrome egqityiweyo, ungaze umhlwa. Ukupakisha: Ibhokisi yesipho, izibini ezingama-20 / i-ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / izibini: $ 4.60. Izixhobo zokuTyibilika kwamaVili: Amavili e-1.Smooth Ukukhetha izinto ezifanelekileyo, izimbo ezinemfashini kunye noyilo lobuqili. Zinganxitywa nakweyiphi na izihlangu. Amavili aguquguqukayo kunye neebhodi zomthi ...
Ukudanyaza iRoller JB152313
Isibiyeli: IPlastiki yePP, Ubungakanani obuBunye buhambelana nakho konke, ubungakanani bevili elinokuhlengahlengiswa: Ivili le-PVC elinezibane ezibengezelayo ze-3-Front, ubukhulu: 70 * 24mm Ukunikela: Isantya esiphezulu sekhabhoni yentsimbi i-ABEC-5 Hardware: Isinyithi sensimbi yentsimbi eneblue yeZinki egqityiweyo, ungaze umhlwa. Ukupakisha: Ibhokisi yesipho, izibini ezingama-20 / i-ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) I-FOB Ningbo / izibini: $ 4.20 Indawo yokubeka izihlangu: izinto ezintsha, umbala oqaqambileyo, amandla aphezulu, ubhetyebhetye bezinto ezinamavili: I-PVC, kunye nokuqina okuthile kunye nokunxiba Ukunikela: Ukuthwala i-Iron, kugudile kwaye akukho kumelana ...
Ukudanyaza iRoller JB152323
Isibiyeli: IPlastiki yePP, Ubungakanani obunye buhambelana nazo zonke, ubungakanani bunokuhlengahlengiswa. Ivili: Isondo le-PVC elinezibane ezibengezelayo ezi-3-ngaphambili ze-LED, ubungakanani: 70 * 24mm Ukunikela: Isantya esiphezulu se-608ZZ i-Hardware: Isinyithi sensimbi yentsimbi kunye neBlue zinc eqhubekileyo, ayizange irusi. Ukupakisha: Ibhokisi yesipho, izibini ezingama-20 / i-ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / izibini: $ 3.60 Indlela yoTeksi: 1. Emva kokugqiba amalungiselelo angaphambili, qala ukutyibilika, beka unyawo lwakho ngaphambili ngaphambili kolunye unyawo , beka zombini iziphelo ngokudibeneyo, phakamisa iinzwane zangaphambili ziye kwi-7-8cm ...
Ukudanyaza iRoller JB162323
Isibiyeli: I-PP, iPlastiki, ubungakanani obuBunye buhambelana nazo zonke, ubungakanani bunokutshintsha ivili le-PVC ngaphandle kwezibane, ubungakanani: 72 * 24mm Ukunikela: isantya esiphezulu se-608ZZ Hardware: Isinyithi sensimbi yentsimbi eneblue zinc eqhutyiweyo, ungaze umhlwa Ukupakisha: Ibhokisi yesipho, izibini ezingama-20 / I-ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / izibini: $ 2.20 Indawo yokubeka izihlangu: izinto ezintsha, umbala oqaqambileyo, amandla aphezulu, ubhetyebhetye obulungileyo Izinto ezinamavili: i-PVC, kunye nothamba oluthile kunye nokunxiba ukunxiba; Ukunikela: Ukuthwala i-Iron, egudileyo kwaye akukho mbala wokumelana: mnyama, luhlaza okwesibhakabhaka, pinki, gree ...
Ukudanyaza iRoller JB132411
Iplastiki ye-PP, Ubungakanani obunye buhambelana nayo yonke into, ubungakanani bunokutshintsha ivili: I-PVC yevili kunye ne-3 ekhokele ukukhanya kwezibane, ubungakanani: 72 * 24mm 3.Ukuthwala: Isantya esiphezulu sekhabhoni yentsimbi i-ABEC-5 Intsimbi yentsimbi ene-chrome egqityiweyo. Ukupakisha: Ibhokisi yesipho, izibini ezingama-20 / i-ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) I-FOB Ningbo / izibini: $ 4.80 iimpawu zokuhambisa ivili: 1. Isilayidi esityibilikayo, isikrufu esithembekileyo esiphakathi ukulungelelanisa ubungakanani 2. Iivili ezi-Smooth zincinci kwaye zilula, Kulula ukuyiphatha, inokufakwa kwizihlangu ezithe tyaba ngokuthanda, ukuhlanganisa kunye nokuqaqa ngokukhululekileyo. 3 ....